7 talooyin fudud si neeftaadu u cusboonaato - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • WAXYAABAHA CAAFIMAADKA »7 talooyin sahlan si aad uhesho neeftaada cusub
7 talooyin fudud si aad uhesho neeftaada cusub
Eliseo Emma Kamgang 26 August 2019
Neefsasho xun ayaa dhici karta waqti kasta oo noloshaada ka mid ah. Sababtu maaha mid la la'yahay. Laakiin inta badan way adag tahay in la noolaado. Nasiib wanaag, waxaa jira talooyin sahlan oo wax ku ool ah oo lagaga hortagayo dhibaatadani oo si degdeg ah ugu noqon karta curyaan dhab ah.
Neefta xun (magaceeda cilmiyeed waa halitosis) ma aha mid aan waxba galabsan. Mararka qaarkood waxay tilmaamaysaa qaab nolol xumo (qaadashada khamriga iyo tubaakada). Hase yeeshe, inta badan waa calaamadda xaalad laga yaabo inay tahay mid caafimaad leh, sida qabow, dhibaatada ilkaha ama miyir-beeleed, ama cudur culus sida sonkorowga ama kansarka. Urka aan caadiga ahayn ee dhabarka afka, waa in mar waliba la adkeysto. Sidaa darteed haddii shaki ku jiro, ha ka waaban inaad la tashato dhakhtarkaaga iyo dhakhtarka ilkaha. Dabeecadda wax fiican ayay u leedahay. Waxay had iyo jeer leedahay wax ay bixiyaan si ay u daaweeyaan qaladaadka nolol maalmeedka. Boggaga soo socda, waxaad ka heli doontaa talada hooyada Dabiiciga ah si looga fogaado neefta xun.
Ku adkeyso nadaafadda afkaaga
Qoraalkan waxaa laga yaabaa inuu u muuqdo mid muuqda, laakiin dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ah inta badan waa kuwo liita. Maalin kasta, ilkahaaga, subaxii, duhurkii iyo habeenkii, inta lagu jiro 2 daqiiqadaha 3. Isticmaal jeebka ilkaha. Waxaa fiican inaad isticmaasho daawada cadayga ee dabiiciga ah oo aan aad u garaacaynin PH ee afkaaga. Ugu dambeyntii, ma jirto baahi ah in la sugo neefta xun si ay u hesho caado u samaynta dhar dhaqidda dabiiciga dabiiciga ah ee laga sameeyay mashiinkaaga, cagaarka, dhirta, qorfe ...
Nadaafad caan ah oo la yiraahdo essentielles
Noocyo saliid oo lagama maarmaan ah ayaa kaa caawin kara inaad ku hesho afka cusub. Waxaad ku shubi kartaa dhibcaha 2 ama 3 ee saliida lagama maarmaanka ah, ama basil ama shaaha geed shuban ah. U ogolow in sonkorta lagu qooyo afkaaga, dhalaalid ka hor. Haddii aad rabto inaad ka fogaato sonkorta sonkorta, halkan waa hab kale oo aad u qaadato: waxaad karisid shaaha saliid saytuun ah oo leh shayada 2 ama 3 mid ka mid ah sadexdan saliid ee muhiimka ah. Ka dibna liqo waxyaalahan.
Neefsashada xun badiyaa waxay ka tarjuntaa cillad gudaha ah. Sidaa darteed waa mid xiiso leh inaad ka fikirto nadiifinta jirkaada. Si aad u bilowdo si tartiib ah, cabi nus litir subax kasta, on calool madhan. Ku qas biyo kulul oo casiir ah nus nus litir iyo cabitaan cusub. Qalabkan quruxda badan ee ay dad badani isticmaalaan, ayaa ka caawiya xalinta dhibaatooyinka aysidhka ee sida caadiga ah u ah waqtigeena.
Dhirtan waxay caan ku tahay la dagaalanka neefta xun. Waxaad u isticmaali kartaa dhowr siyaabood: qaab saliid muhiim ah, marka ay kugu filan tahay inaad ku milmid seddex ama afar dhibcood oo saliid ah milix muhiim ah galaas biyo ah, iyo inaad si fiican ugu dhex qasto dhowr jeer isku-darka maalin. Waxaa iska cad inay suurtagal tahay in loo isticmaalo thyme iyada oo loo marayo infusions dhaqameed. Waad cabi kartaa waqtiyada 3 jeer maalintii, ama waxaad ugu adeegsan kartaa afka suufka afka ah sida aad rabto.
Waa alaab "2 in 1". Ma aha oo kaliya waa dhirta dabiiciga ah ee dabiiciga ah sababtoo ah content chlorophyll laakiin waxay leedahay awooda in "qabato" qaybaha sulphide kuwaas oo kufilan afkooda. Sidaa darteed wuxuu la dagaallamaa neefta xun wuxuuna keenaa casriyeenta. Waayayaashu waxay u isticmaaleen in ay yareeyaan dhirta yar ee dhir u ah neefta cusub. Tallaabooyin fudud ayaa mararka qaarkood ah kuwa ugu waxtarka badan. Waxa kale oo aad diyaarin kartaa faleebo dhir ah oo aad u isticmaashid qandhadaada.
Cunto cunto ayaa hodan ku ah chlorophyll
Neefta xun waxay kugu riixi doontaa inaad dib u eegto cuntadaada. Ka soo saar suxuunta aadka u culus ee lagu dheefshiido, cabbitaannada fudud, kaafi, aalkolo ... Ku soo laabo suxuunta fudud, oo aad kuugu yeeri doonto cuntooyin badan oo cagaaran oo hodan ah chlorophyll. Tusaale ahaan, u samee saladh cagaaran leh dhir, celery, midab, avokado iyo qallaji saliid saytuun. Cuntooyinkan cagaaran waxay u nadiifin doontaa beerkaaga waxayna keeneysaa wax yar oo cusub oo afkaaga ah.
Kansarka waa laga hortagi karaa? - Bayaanka Gobolka Baay